* Light Of Myanmar *: ဘာကြောင့်လဲ ? ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ?
Posted by * In Search of Truth * at 7:23 PM
Tun Tun Lin said...
If you utilized with proxy bypass s/w, you could not trace the owner.
As far as I concern, I found above URL and profiles. You might wanna check it out for more details.
ကို Tun Tun Lin
Proxy IP တွေသည် Ping လုပ်လို့ရပါသည်။ Private IP များသည် Ping လုပ်တိုင်းမရပါ။ ထိုအချက်ကို အခြေခံပြီး Proxy သုံးမထားဟု ယူဆပါသည်။ Host Name ကိုလေ့လာသောအခါတွင် Proxy ဟု မယူဆနိုင်ပါ။ ကျနော့ စမ်းသပ်ချက် မှားယွင်းပါက ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးများစွာ တင်ရှိပါမည်
I guess, one of the embedded ISP is yours. My point is that someone from Russia who do visit in your Cbox within our CHAT. I would like to send the photos of the ISP' location.
A. StarHub Cable Vision Ltd, Singapore 11 October 2007 13:56:02
B. 11 October 15:12 Velcom, Toronto, Ontario, Canada
C. 11 October 16:06 SmartLogic Ltd., Moscow, Moscow City, Russia
I've highly appreciate for your contribution. Please don't think me wrong.
ရုရှကလူတွေ ကျနော် ဘလော့လာတဲ့ အကြောင်း နဲ့ ကိုမော်စကိုသား ကိစ္စနဲ့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှု ရှိတယ်လို့ ယူဆ ထားသလဲ? ကျနော့ ကို တချက်လောက် ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ
Buddhist dwe har lane mar yin kyay dal so dae sa car ko pyan pyin ya ma lo pyit nay pi..
Arr lone har MMataut Democracy lo chin kya par dal. Dar pae mae, dar koakyaung pya pi, mite yine chin dine mite yine dar daw , bal kg ma lae.. naut pi, ko name ko ma tone bae... tu myar name ko tone dal.
KZM, Do not follow the majority when the majority is wrong. Stick to your beliefs and know yourself well. Pls write more......
what why ?.............................
အိုး.. ဖင်လန် ကူအိုပီအိုဆိုလို့ အရမ်းအဲ့သြသွားတယ် . ပြောလို့တော့ မရဘူးဗျ.. လူဆိုတာ အမျိုးစုံရှိတာလား၊ သို့သော် ဖင်လန်ရောက်မြန်မာများဟာ များသောအားဖြင့် ဒုက္ခသည် တွေ .. ဒါမှမဟုတ် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သူတွေများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက် ရိုင်းဆိုင်းတဲ့ လူတော့ ဖင်လန်မှာရှိမနေသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Better to kill these mother fucker !
ကျနော်ထင်တာ စစ်သား မဟုတ်လောက်ဘူး ဖင်လန်ရောက်နေတဲ့ ဒုတ်ခသည် ကုလားဖြစ်မယ်။ ဒီကောင်ဟာ ဒီမိုအစစ်လည်း ဟုတ်ဟုန်မတူဘူး သေချာတာကတော့ ဒီကောင်မွတ်ဆလိမ်ဘဲ